[တရားဝင်] dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက် Root: တစ်ခုမှာနှိပ်ပါနှင့်အတူသင်၏ Android ဖုန်းကို Root
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက် Root
တစ်ခုမှာနှိပ်ပါနှင့်အတူသင်၏ Android ဖုန်းကို Root
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက် Root အမြန်ဆုံးနှင့်အများဆုံးအဆင်ပြေအန်းဒရွိုက်အတွက် root အတွေ့အကြုံကိုပေးထားပါတယ်။
အန်းဒရွိုက် Root သင်၏ဖုန်းများ၏အပြည့်အဝအလားအလာ Unlock
လျင်မြန်စွာတဦးတည်းလုပ်ရတဲ့မရှိဘဲသင်၏ Android ဖုန်းကို root လုပ်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ။
ဒေါက်တာ Fone - အန်းဒရွိုက် Root မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသင့်ရဲ့ Android ဖုန်း root ရန်သင့်အားကူညီပေးသည်။ ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ပြီးနောက်ရုံကြွင်းသောအရာရှိသမျှသည်အလိုအလျှောက်ဖြစ်ပါသည်, Root Now ကို click လုပ်ပါ။
သင့် Android ဖုန်းကိုအပြည့်အဝအလားအလာရယူပါ။
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက် Root သင်သည်သင်၏ Android ဖုန်းကိုအပြည့်အဝအလားအလာရယူကူညီပေးသည်။ စသည်တို့ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွမ်းဆောင်ရည်, ပိုကောင်းတဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်း,
သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းကို Root ။ သင့်ရဲ့ဖုန်းပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့လုပ်ပါ။
အန်းဒရွိုက် Root သင်သည်သင်၏ဖုန်းရဲ့အလားအလာမှအပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။ သငျသညျ, သင့် Android ဖုန်းကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ် access ကို features တွေပိတ်ဆို့ပို apps များပျော်မွေ့, etc
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက် Root Android ထုတ်ကုန်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါဟာလိမ့်မည်စျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်သစ်ကိုပစ္စည်းတွေတစ်ကြိမ်ထက်ပိုထောက်ခံပါတယ်။ အားလုံးထောက်ပံ့ထားသည့်ကိရိယာများကိုကြည့်ပါ။
အန်းဒရွိုက် Root စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုနှုန်းမှာရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဒေတာမှမဟုတျအန္တရာယ်။
နောက်ထပ် Apps ကပ access
သယ်ဆောင်ပိတ်ဆို့ရဲ့ Apps ကပ Install လုပ်ပါ။ Play Store မှ "သဟဇာတ" ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ခံစားပါ။
Custom ROMs တွေကို Install
Custom ROMs တွေကိုလုံးဝသင့်ဖုန်းကိုသုံးပါကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲသွား။ သင်ပင်အခြားလူတိုင်းအတွက်ရှေ့တော်၌ထိုနောက်ဆုံးပေါ် Android ဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
Access ကို Blocked အင်္ဂါရပ်များ
သူတို့ဖြန့်ချိခင် photosphere, နှေးပြကွက်ဗီဒီယို, နှင့် NFC ကိုမိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုတူသောသစ်ကိုအန်းဒရွိုက် features တွေခံစားပါ။
Uninstall ကို Preinstalled Apps ကပ
ထုတ်လုပ်အားဖြင့်အသင့်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအချို့သောအသုံးမကျ, နှောင့်အယှက်, အာကာသ-wastingapps uninstall ။ သင့်ရဲ့ Android ကိုပိုပြီးအဆင်ပြေစေပါ။
unneccessary RAM နဲ့ CPU အသုံးပြုမှုလျှော့ချဖို့ bloatware uninstall ။ သင့်ရဲ့ Android အရှိန်မြှင့်။
Apps ကပအတွက်ကြော်ငြာ Remove
သင့်ရဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ် apps များအပေါင်းတို့၌နှောင့်အယှက်ကြော်ငြာတွေပိတ်ဆို့ဖို့တစ်ခုမှာနှိပ်ပါ။ အဘယ်သူမျှမကပိုစိတ်ပျက်စရာသင် Android ပေါ်မှာဂိမ်းများကိုဆော့ကစားသည့်အခါ။
လျင်မြန်စွာနှင့် Safely သင်၏ဖုန်းကို Root
လုံခြုံစွာသင့်ရဲ့ Android ဖုန်းကို root လုပ်ဖို့တစ်ခုမှာနှိပ်ပါ။
>> ထောက်ပံ့ထားသည့်ကိရိယာများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို MODEL စာရင်းစစ်ဆေး
အဘယ်အရာကို Root လုပ်ခြင်းအားသလဲ?
rooting အမျိုးမျိုးသောအန်းဒရွိုက်စနစ်အားအပေါ် SuperUser ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ jailbreaking ပြုလုပ်ခြင်း၏အန်းဒရွိုက်ညီမျှသည်။
သငျသညျ Root လုပ်ခြင်းအားပြီးနောက်ရနိုင်ဘယ်အရာကို benifits?
အဆိုပါ device ကိုသင် operation system ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်အောင်, rooting ပြီးနောက်ပိုမိုမြင့်မားအခွင့်ထူးရယူမလိုချင်တဲ့ Pre-installed apps များ uninstall နိုငျသညျ, access ကိုစသည်တို့ကို, features တွေပိတ်ဆို့
အန်းဒရွိုက် Root ငါ၏အစက်ကိရိယာ၏အာမခံပယ်ပါသလား?
ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောဖုန်းကိုထုတ်လုပ်သူရဲ့အာမခံမူဝါဒအပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်ငါတို့သည်သင်တို့အမြစ်ဝင်ရောက်ခွင့်ကို clean up ကိုကူညီတခု unroot tool ကိုပေးနိုင်ပါသည်။
အန်းဒရွိုက် Root ၏အောင်မြင်မှုကိုမှုနှုန်းကဘာလဲ?
လောလောဆယ် Android ကို Root ကွဲပြားခြားနားသော operating system ကို run နေထက်ပိုမို 7000 မှာ Android devices တွေကိုထောက်ခံပါတယ်။ သူတို့ဖြန့်ချိနေကြပါတယ်တစ်ချိန်ကကို Android Root လျင်မြန်စွာပိုပြီးသစ်ကို Android ထုတ်ကုန်ကိုထောကျပံ့မညျဖွစျသညျ။
ငါ drfone တွေ့ရှိခဲ့မတိုင်မီသည်အခြားအမြစ် tools တွေနဲ့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ drfone တကယ်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းငါ၏အ Samsung Galaxy Note အမြစ်တွယ်။ ဝိုး!!!
ဒေါက်တာ Fone ကယ့်ကိုကကို advertise အဘယ်အရာကိုမှတက်နေထိုင်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့မိတ်ဆွေများကအကြံပြုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
DrFone ချောချောမွေ့မွေ့ငါ၏အ Note3မှာအမြစ်တွယ်။ အတော်လေးအံ့သြဖွယ်အတွက် root အတွေ့အကြုံကို။
Beginner တွေရဲ့လမ်းညွှန်: Nexus5ကို Root လုပ်နည်း
Nexus အမြစ် Toolkit ကိုနှင့်၎င်း၏အကောင်းဆုံးအစားထိုးစရာတွေနဲ့အမြစ်က Nexus
အလွယ်တကူနဲ့ Safely ဆိုနီ Xperia Z1 Root လုပ်နည်း
Root Samsung ရဲ့ Galaxy S4 ကို3နည်းလမ်းများ Safely နှင့်လွယ်ကူစွာ
လက်တွေ့လမ်းညွှန်: ခြေလှမ်းများအတွက် HTC One M8 root လုပ်နည်း
အန်းဒရွိုက်ဖုန်း & Tablet ကိုများအတွက်ထိပ်တန်း 50 အကောင်းဆုံး Root လုပ်ပြီးသား Apps ကပ
Rooting မပါဘဲ Android ပေါ်မှာ Apps ကပ Hide နှစ်ခုနည်းလမ်းများ
အလွယ်တကူ Root Moto E ကိုနှစ်ဖြေရှင်းနည်းများ
Root Browser ကိုမှအပြီးအစီးလမ်းညွှန်